Garee cimaa Gaarzi Kiruuks torbee kanaa - BBC News Afaan Oromoo
Garee cimaa Gaarzi Kiruuks torbee kanaa
Maanchistar siitiin Arsanaaliin goolii 3-0'n injifachuun bara leenjisaa Peep Gaardiyoolaatti waancaa isaanii isa jalqabaa mo'ataniiru. Maanchistar Yunaaytidis Cheelsii 2-1'n mo'achuun gara sadarkaa lammaffaatti deebi'eera.
Eenyufaatu gahuumsa garee cimaa torbee kanaa keessatti isaan filachiisuu agarsiise?
Garee cimaa torbee kanaa xiinxalaa kubbaa miilaa Gaarzi Kiruuks akkasitti qopheesineerra.
Goolii eegaa- Kilaawdiyoo Braavoo (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Seenaa goolii eegdota Maanchistar Siitii tapha liigii waancaatti Braavoon, goolii eegaa gooliin itti hin galle isa duraati.
gareen tokko goolii eegaa isaa isa lammaffaatiin tapha waancaa liigiirratti yeroo hiriirsisu naasisuu danda'a. Braavoon garuu tapha Arsanaal waliin tureen gahuumsa dinqisiifamu agarsiise.
Ittisa- Eriik Diyaar (Tootanhaam)
Goodayyaa suuraa Tapha Kiristaal Paalaas waliin tureen Di'eer kubbaawwan heddu garee faallaarraa fudhachuun garee isaa keessaa kan isa caalu hin jiru
Eriik Di'eer tapha miidhagaa akkasii yeroo taphatu kaniin erge erga yeroo dheeraa booda amma kan jalqabaati. Kiristiyaan Benteekii fi Aleksaander Soorlootiinis haalaan qolateera.
Virjiil Vaan Diyaak ( Liivarpuul)
Goodayyaa suuraa Vaan Diyaak tapha Weesti Haam waliin ture irratti kubbaawwan qilleensarraan dhufan 10 garee faallaarraa fudhateera
Maanchistar Yunaaytid dirree isaarratti tapha nuffisiisaa wayita taphatan faallaa kanaan Liivarpuul Aanfiilditti tapha nama gammachiisu taphatan. Rakkoo tasgabbii dhabuu ittisaa yeroodheeraaf tures Vaan Diyaak fureera.
Ittisa- Viinseent Koompaanii (Maanchister Siitii)
Goodayyaa suuraa Tapha waancaa Kaarbaa'oorratti taphataan Siitii akka Koompaanii kubbaa fageessee dhiite hin jiru
Miidhama itti deddeebi'een booda Koompaaniin garee waancaa mo'ate, Siitii, keessaa gare cimaaf filatameera. Taphoottoota miidhama booda gara gahuumsa isaanitti deebi'anii injifannoo argachuu qaban keessaa Koompaaniin tokko.
Sarara gidduu- Mohaammad Saalaah (Liivarpuul)
Goodayyaa suuraa Saalaan waggaa kana keessa gooliiwwan 31 keessatti kallattiin hirmaateera
Osoo isa hin filatiin darbuu hin danda'u. Mahaammad Saalaan taphoota wallitti aanaan jahaaf Liivarpuuliif goolii galchuu danda'eera.
Sarara gidduu- Aleksi Oksilaande Chaamberliin (Liiverpuul)
Goodayyaa suuraa Liivarpuul tapha Weestihaamiin injifaterratti Chaamberliin taphataa hunda caala carraa hedduu uumedha
Amma milkaahuu eegaleera. Aleksi Oksilaande Chaamberliin taphataa fakkaachuu eegaleera. Taphataan kun waltajjiiwwan gurguddoo hin sodaatu.
Sarara gidduu- Wiiliyaan (Cheelsii)
Goodayyaa suuraa Wiiliyaan taphoota hundaan Cheelsiif goolii 12 galcheera.
Taphataan kun tapha torbee kanaa Baarseloonaa fi Maanchistar Yunaaytid waliin taphate irratti ajaa'iba ture. Antooniyoo Koonteef garuu hin milkoofne.Liinjisaan kun haala gaariirra isa hin turre Alvaaroo Moraataa dhiisanii isa gaarii ture Eedin Hazaardiin jijjiiraniru.
Sarara gidduu-Andiriwu Roobertisan(Liivarpool)
Goodayyaa suuraa Andiriwuu Roobertsan bara kana keessa yeroo lammaffaaf kubbaa maniif ta'u mijeesseerra
Taphoota Liverpool 14 keessaa 13 irratti hiriiruunsaa cimina taphataa kanaaf dhugaa baha. Tapha weshaam waliin taphatan irratti kubbaawwan inni dabarsaa ture ajaayibsiisoodha.
Taphataa fuulduraa-Sarji'oo Aguweeroo (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Sarjiyoo Aguweeroon bara 2018 keessa taphoota 13 taphaterratti manii 15 galcheera
Gareen Arsenaal tapha waancaa xumuraa Karabaa'oorratti haala suukanneessaadhaan kan mo'aman yoo ta'u kun hunduu kan ta'e sababa Sarjiyoo Aguweeroon Shakurdaan Mustaafii sodaateefi. Wayita taphattoonni sarara fuul duraa taphattoota sarara ittisaa sodaatan maaltu ta'a laata?
Taphataa Sarara Fuulduraa-Roomeeluu Lukaakuu (Man. Yunaayitiid)
Goodayyaa suuraa Erga Fulbaana darbeetii Lukaakuun yeroo jalqabaaf maniis galchee kubbaa maniif ta'us kan mijeesse
Gareen Maanchisteer Yunaayitiid qabxii galmeessisaa jiraatanis dirree isaaniirratti garuu taphi isaanii nama hin hawwatu. Deggertoonnis kanatti mufataa jiru. Cheelsii waliinis taphuma walfakkaatu kan agarsiisaa turan yoo ta'u sababa lukaakuu oolan.
Taphataa sarara fuulduraa- Gilaan Maariy(Biraayitan)
Goodayyaa suuraa Bara kana taphattoonni Ingilizii manii lakkoobsisuun Muraayi caalan sadi qofa
Gareen Biraayitan tapha Siwaansii waliin taphatan irratti qabxii murteessaa sadi argataniiru. Taphataan sarara fuulduraa ganna 34 Gileen Muraayi naannoo maniitti tasgabbiin inni agarsiisu gareen Biraayitan waggaa lammaffaaf akka liigicha keessa turu ni gargaara.